Inspiration - Creativos an-tserasera | Creativos Online (Pejy 2)
Fametrahana Gazety Tokony ho Fantatrao
Raha mbola tsy fantatrao ny endrika gazety tsara indrindra amin'izao fotoana izao, dia matokia fa manolotra azy ireo aminao izahay ato amin'ity boky ity.
inona no atao hoe cynicism
Raha mbola tsy fantatrao ny atao hoe cynicism, na ny mpamorona azy, dia manasa anao izahay hiditra amin'ity publication ity ary hahita azy rehetra.
Tantaran'ny logo Burger King
Efa nisy an-taonany maro ny Burger King fa fantatrao ve fa tsy toy izany ny logo-ny? Fantaro ny tantaran'ny fango Burger King sy ny fiovany
Ireo endri-tsoratra 8 tsara indrindra amin'ny milina fanoratana
Raha te hiverina amin'ny fotoana ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra ny endri-tsoratra tsara indrindra izahay.
Ohatra tsara indrindra amin'ny fonosana famoronana
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka hamoha ny fahaiza-mamorona anao izahay amin'ny alàlan'ny fanehoana anao ny fisafidianana ny fonosana famoronana tsara indrindra.
Ny endri-tsoratra hippie tsara indrindra
Raha mila fitaomam-panahy ho an'ny endrika tamin'ny taona 60 sy 70 ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia misafidy ireo endri-tsoratra hippie tsara indrindra izahay.
Ny endri-tsoratra minimalista tsara indrindra
Raha mitady endri-tsoratra minimalista ho an'ny tetikasa famolavolanao manaraka ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hisafidy ny tsara indrindra izahay.
Inona avy ireo singa mandrafitra afisy japoney?
Raha liana amin'ny afisy japoney ianao ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao amin'ny fomba lalina ny momba azy ireo.
Ny tantaran'ny logo Tesla
Fantatrao ve ny tantaran'ny logo Tesla? Fantaro ny fomba niantombohan'izany rehetra izany sy ny dikan'io T mahaliana io avy amin'ny tanan'i Elon Musk.
Marika manokana: ohatra
Ny marika manokana dia zavatra ahafahanao misongadina amin'ny mpifaninana aminao. Ankoatra izany, manana ohatra malaza momba ny marika manokana ianao. fantaro izy ireo
Karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana maimaim-poana alaina
Efa mba niarahaba olona iray ve ianao nefa tsy fantatrao hoe ahoana? Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny sasany amin'ireo karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra
Ahoana ny fomba fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy
Tsy mahafantatra ny fomba fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy ary te hamorona zavatra hafa? Omentsika safidy vitsivitsy ianao hahazoana izany.
Mitadiava safidin'ny Billboard Mockups maimaim-poana izay azonao ampiasaina amin'ny tetikasa izay iandraiketana anao amin'ny famolavolana takelaka
Ahoana ny fomba hamoronana sary miaraka amin'ny lahatsoratra
Tsy hainao ny mamorona sary miaraka amin'ny lahatsoratra? Misy safidy maro azonao ampiasaina, na dia tsy mpamorona aza ianao. Hazavainay aminao izy ireo.
Mihabetsaka ny olona manomboka mamorona ny gazetiny manokana. Ahoana anefa no hanaovanao gazety? Hazavainay ny tokony hataonao.
Ahoana no hanaovana kalandrie
Tsy azonao antoka ny fomba fanaovana kalandrie? Iray amin'ireo asa mora indrindra izany ary manana fitaovana maro ho an'izany ianao. Fantaro izy ireo!
Mockup taratasy fanoratana orinasa
Raha manana orinasa naniraka anao hamolavola ny marikany ianao, dia mila mockup fanamafisam-peo orinasa hanehoana ny endriny.
Fanesoana amin'ny magazine
Fantatrao ve ny atao hoe mockup magazine? Ary ny fampiharana maro azonao omena azy? Mitadiava modely mety tsara ho anao.
Logo tsara indrindra: ny fantatra indrindra amin'ny tantara
Manontany tena ve ianao hoe iza no logo tsara indrindra amin'ny tantara? Hojerentsika ireo logo fanta-daza indrindra mba hahitanao ny toetrany.
Afaka mahita modely katalaogy mitsitsy fotoana maro ianao amin'ny Internet. Fa mila ohatra ve ianao? Indro omenay anao
Logos ho an'ny ekipa mifaninana
Manana ekipa ve ianao ary mila logo matanjaka? Eto izahay dia manolotra anao Logos ho an'ny ekipa mifaninana izay afaka mandeha tsara ho anao.
Fantaro ny maha-zava-dehibe ny mockup kalandrie, ny fomba ahafahanao mamorona iray sy ohatra sasantsasany amin'ny mockup maimaim-poana avy amin'ny tranonkala.
Ohatra amin'ny sakafo fisakafoanana
Manana trano fisakafoanana ve ianao ary te hanavao ny sakafo? Asehoy anao ohatra sasantsasany amin'ny sakafo fisakafoanana azo ampiasaina.
Tokony ho tokana sy tsy hay hadinoina ny anaranao marika. Misy karazana anarana maromaro, izay hanampy anao hamorona sy hanavaka ny anao.
Mitadiava safidin'ny t-shirt maimaim-poana mba hahafahanao miara-miasa amin'ny mpanjifa sy manolotra asa matihanina kokoa.
Sary an-tsary miloko
Te hahazo wallpaper miloko ve ianao? Eto izahay dia mamela anao santionany amin'ny toerana tsara indrindra hisintonana azy ireo. Misy safidy!
Ohatra amin'ny famolavolana sary
Jereo ny sasany amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny famolavolana sary teo amin'ny tantara. Misy ny marika fanta-daza sy ny hafa tsy toy izany, fa miavaka.
Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny Photoshop
Mila mianatra manao logo amin'ny Photoshop ve ianao nefa tsy hainao ny manao izany? Eto izahay dia manome anao ny dingana mba hahafahanao mamorona iray.
Efa nahita afisy lalao video ve ianao ary nieritreritra hoe manao ahoana ny endriny? Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny iray amin'izy ireo izahay.
Logos tany am-boalohany sy famoronana
Raha manontany anao momba ny logos tany am-boalohany sy famoronana izahay, firy no ho azonao lazaina? Fantaro hoe inona no mahatonga ny logo sy ohatra.
Fantatrao ve ny atao hoe portfolio interactive? Ary inona no azonao amin'izany? Fantaro ny fomba hanaovana izany ary jereo ny ohatra hita maso sasany.
Ahoana no fomba hamoronana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao
Jereo izay rehetra tokony ho fantatrao hamoronana rakotra boky, na ny fonony na ny fonony aoriana ary koa ny an'ny matihanina.
Mitady modely meme? Nahatratra toerana iray ahitanao lisitry ny tranokala miaraka amina modely meme vonona ianao.
Mitady sary an-kianja ve ianao? Manome anao safidin'ireo tranokala ahafahanao mahita ny sasany amin'izy ireo vonona ny hisintona.
Ireo esoeso miisa 6 tsara indrindra
Jereo ny sary esoeso tsara indrindra azonao atao mba hanomezana ny realité ireo tetikasanao ireo ary hitovy amin'ny tena fiainana izy ireo.
Aiza no misintona ny sary +1000 ho an'ny Photoshop
Mitadiava tranonkala maromaro ahafahanao misintona firavaka Photoshop mihoatra ny arivo ho an'ny tetikasa rehetra anananao, amin'ny fomba isan-karazany.
Ianao ve mitady mandala handoko? Eto izahay dia manome anao safidy maromaro ahafahanao mahita ny safidin'izy ireo maimaim-poana halefa.
Tsoratadidy tany am-boalohany
Mitadiava hevitra vitsivitsy hanamboarana tsoratadidy tany am-boalohany izay tsy mahazatra. Tena tsara ho an'ny mpamorona izay miasa miaraka amin'ny mpanoratra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia nangoninay ireo niova fo 5 tsara indrindra ho an'ireo litera tsara tarehy hahafahanareo miditra amin'ireo karazana miloko mampino. Aza hadino izany!
Tsy fantatrao ve izay atao hoe mockup book? Jereo hoe iza izy ireo ary ohatra vitsivitsy izay hanampy anao hampiroborobo ny bokinao amin'ny fomba mahomby.
Ny endritsoratra tsara tarehy indrindra ho an'ny endriny
Jereo ny sasany amin'ireo endri-tsoratra tsara tarehy indrindra ampiasaina amin'ny volavolanao ary omeo endrika vaovao ireo tetikasanao.
Fomba fanamboarana takelaka
Te hahay hanamboatra takelaka takelaka ve ianao? Manome anao ny lakile izahay mba tsy hanoherana sy hahazoana valiny famoronana.
Karatra fandraharahana tany am-boalohany
Mieritreritra ny hanao karatra fandraharahana ve ianao nefa tianao hisarika ny saina? Avy eo mandehana amin'ny karatra fandraharahana tany am-boalohany
Top 10 Basic and Advanced Photoshop Courses
Raha mitady fampianarana Photoshop mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao dia aza mandany fotoana mampitahanao intsony, vakio ny soso-kevitrao.
Loko pastel: inona avy izy ireo ary palet sy hevitra 50 hanambarana azy ireo
Raha te hanomboka hampiditra loko pastel amin'ny volavolanao ianao, aza adino ity lahatsoratra ity izay hahitanao hevitra momba ny fomba fampifangaroana azy ireo.
Ny fampisehoana voalohany dia tsy sarotra atao, indrindra raha manana programa afaka manampy anao mamorona azy ireo ianao. Jereo izy ireo!
Ny firafitry ny hazo dia iray amin'ireo mora atao indrindra amin'ny tenanao ary manome ny volavolanao hikasika voajanahary kokoa. Mianara manao azy.
Ahoana ny fanaovana sary 3D litera
Ny litera 3D dia iray amin'ireo fomba hita maso indrindra hisarihana ny sain'ny mpampiasa. Fantatrao ve ny fomba tokony hanaovanao azy ireo amin'ny volavolanao?
Ahoana ny fomba hanaovana gifs animated
Ny gif animated dia amin'ny lamaody foana ary ankehitriny ianao dia afaka mianatra ny fomba hanaovana azy ireo tsikelikely amin'ny programa na fampiharana samihafa.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny teknikan'ny pointillism? Izy io dia fomba iray mahaliana amin'ny fanaovana fanoharana. Fantaro bebe kokoa momba azy!
Hevitra mahafinaritra ahafahana manao collage vintage
Jereo hoe toy inona ny sary an-tsokosoko ary ny fomba tsy maintsy anorenanao ny tenanao tsikelikely ary mora amin'ny zavatra anananao ao an-trano.
Ny doka amin'ny sora-baventy dia endrika dokam-barotra mandeha amin'ny alàlan'ny media sosialy. Jereo ohatra.
Fomba fanaovana sary biby
Te hahay misarika biby ve ianao? Eto izahay dia miresaka momba ny lakile mba hahafantaranao ny fomba fanaovana sary biby isan-tsikelikely.
Ny resabe sy ny zava-misy amin'ny sary sokitra Medusa izay tsy anaovan'ny vehivavy firaisana ara-nofo ny vatana vehivavy
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny angano grika momba ny Medusa, Garbati dia nanjary nalaza tamin'ny taona 2018 mba hiverina any Manhattan indray.
Ahoana ny fomba fananganana ny maha-maso ny marika
Ny maha-maso ny marika dia misy fiantraikany amin'ny sarin'ny orinasa. Raha te hahafantatra ny fananganana azy ianao dia aza adino ity lahatsoratra ity!
Hevitra ho an'ny kitapo lamba manokana
Raha te-hanao kitapo lamba manokana ianao nefa tsy mahay manamboatra azy dia ireto misy hevitra manentana anao. Jereo izy ireo!
Mora ny manao sary an-tsary
Raha mitady tantara an-tsary mora zahana hanombohana eo amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary sy manga ianao dia ireto misy hevitra tokony hotadidina.
Adobe dia manolotra ny fironana audio voalohany ho an'ny 2021
Ny 3 dia ny fironana amin'ny feo anombohana an'i Adobe hanome elatra an'ity atiny tonga lafatra ho an'ny podcast ity, sy ny maro hafa.
Ireo no lakilen'ny maso sy famoronana ho an'ny 2021 araka ny Adobe
Adobe dia nanolotra izay fironana hita maso sy famoronana manan-danja indrindra amin'ity taona vaovao 2021 ity.
"Rebrand" vaovao an'ny Burger King dia loko iray ahafahana mahita loko
Fotografia vaovao, fonosana, volavola, haingon-trano ary haino aman-jery sosialy ao amin'ny Burger King rebranding miaraka amin'ny loko fisaka.
Karatra krismasy natokana ho azy
Raha reraky ny manana karatra krismasy mitovy foana ianao, dia tadiavo ny fomba fanaovana karatra krismasy namboarina ao anatin'ny minitra.
Ireo takelaka bilaogy 5 mahaliana indrindra
Ny takelaka takelaka dia endrika dokambarotra mahatratra mpihaino marobe. Fa raha tokony hiasa izy ireo dia tsy maintsy ho original.
Jereo ny tantaran'ny tombokavatsa misy foko sy ny karazana misy ary ny maoderina indrindra amin'ny lamaody ankehitriny.
Ny fampiharana Museo Picasso Málaga dia azo alaina amin'ny Android sy iOS izao mba hahafahanao mitsidika azy amin'ny Internet
Rindrambaiko iray avy amin'ny Museo Picasso Málaga hianarana antsipirihany ny asan'ilay mpanao hosodoko lehibe ary hianarana momba ireo firaketana ao an-tanàna Picasso.
Ny logo marika marika akanjo tsara indrindra sy ny fomba famoronana sary famantarana
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao ny lisitry ny logo marika akanjo tsara indrindra ary torolàlana misy fitaka ho anao hamoronana anao manokana.
Ny fiheverana ireo amboradara 'an'habakabaka' ambanivohitra anglisy ireo
Andininy an-jatony sy asa ambony iray avy amin'ity mpanjaitra anglisy ity izay miaraka aminy ny amboradara no mampiseho amintsika ny ambanivohitra anglisy.
Maty tamin'ny faha-88 taonany i Quino, mpamorona an'i Mafalda
Ilay mpanakanto tantara an-tsary mahatsikaiky Quino dia mamela antsika 88 taona miaraka amin'ny Mafalda mitomany sy manao veloma.
Ary lasa mpankafy ilay singa LEGO vaovao izahay: Baby Yoda
Set Baby Yoda izay hanisy fahasimbana amin'ity Noely ity miaraka amin'ny LEGO sy ireo singa maherin'ny 1.000 hanamboarana ny tenantsika.
Studio Ghibli dia mametraka sary 400 an'ny 8 amin'ny horonantsarin'izy ireo
Fotoana tsara ahafahana mankafy ny sary tsara tarehy indrindra avy amin'ny sarimihetsika Studio Ghibli.
Fanovozan-kevitra momba ny sariitatra Espaniola, Fer dia namela antsika andro iray lasa izay niaraka tamin'ny sary farany izay namaranan'ny ankizy iray ny valan-javaboary niaraka tamin'ny lambony.
Raha tianao i Yoda kely dia miomàna ho an'ireo tanora
Yoda tanora manan-danja iray dia mipoitra mandritra ireo volana ireo hanome antsika hazavana bebe kokoa ary handany amin'ity taona ity amin'ny fomba tsara indrindra. Toy ny zazakely dia manaitra antsika izy.
Ity endritsoratra manafina ny ***** ity dia tsara fotsiny
Izy io aza dia afaka manolo ny endritsoratra antsoina hoe The Polite Type manafintohina ireo teny tsy dia manimba. Hevitra lehibe.
Fanentanana sahy am-barotra izay 500 voafantina any Belzika dia afaka manana ny saron-tava Burker King.
Minimalism, betsaka noho ny kanto sy ny maritrano
Minimalism dia mazàna mampihena ny tena ilaina. Izy io dia niandoha tamin'ny zavakanto sy ny maritrano. Midira ary mianatra bebe kokoa!
Na dia tsy manana marimaritra iraisana amin'ny fialamboly amperora romana amin'ny 3D aza ity mpanakanto ity dia mahaliana ilay asa.
Mpamorona sarimihetsika malaza toy ny The Nightmare Before Christmas, Tim Burton dia mpamorona lehibe. Ampidiro ary fantaro ny antsipiriany bebe kokoa momba azy.
Rehefa apetrak'i Apple amin'ny sary famantarana orinasa kely iray izay voahangy ny seho
Ny tompon'ny Prepear, fampiharana fanomanana sakafo, dia maka an'i Apple amin'ny sary famantarana azy. Odyssey tokoa.
Ahoana ny fandokoana menaka amin'ny antsy palety
Ny spatula, izay hadino lehibe, dia afaka mameno ny sary hosodontsika amin'ny fanehoana hevitra. Midira ary ho fantatrao ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana azy.
Ianaro ireo teknika fanaovana sary mahazatra ireo ho an'ny vao manomboka
Te hanomboka sary ve ianao nefa tsy fantatra hoe aiza no hanombohana? Amin'ireto teknika manaraka ireto dia hianaranao fomba maro hamelomana ny zavatra noforoninao.
Manaova fanamby hananganana ny fahaizanao mamorona
Te hampivelatra ny fahafaha-manao feno anao amin'ny maha mpanao sariitatra anao ve ianao? Manolotra andiana fanamby aho izay hahatonga anao hianatra sy hifalifaly mandritra ny fotoana ataonao. Andao ho any!
Ny voalavo mitafy saron-tava Banksy dia manafika ny London Underground
Manafina ny tarehiny izy, dia namela ny atin'ny iray amin'ireo kalesin'ny London Underground izay naseho tsara tamin'ireny voalavo rakotra sarontava ireny.
Hevitra hanome aingam-panahy anao sy handresena ny sakana famoronana
Manana sakana famoronana ve ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana azy? Eo amin'ny toerana mety ianao. Ho hitantsika ny andiana hevitra handresena azy. Lasa izao!
Ny zava-misy mampatahotra nasongadina tao amin'ny fonony TIME magazine
Tontolo iainana onenanay izay tsy mampiseho famantarana ny maha-planeta andrasan'ny taranaka fara mandimby azy araka ny gazety TIME.
Iwao Takamoto, rehefa mianatra misintona amin'ny toby fitanana ianao mandritra ny Ady lehibe II
Ity animator antsoina hoe Iwao Takamoto ity dia niasa tamina sarimihetsika sarimiaina Disney maro ary nanana ho avy tena manokana izy.
Ny mari-tsarin'ny ekipa NBA miaraka amin'ny tarehin-tsoratra Disney izay ho tianao tsirairay avy
Tsara be ry zareo ka azo ampiasaina ho lobaka misy ny sarin'ny ekipa NBA tiany ary angatahina amin'izy ireo.
Asa tanana vita tanana: lamaody kokoa noho ny hatramin'izay
Vokatra maro hitanao any amin'ny magazay na amin'ny tambajotra no manana ny marika tanan-tanana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny mpanao asa tanana kely ianao dia ity ny lahatsoranao.
Ny kanto mihantsy sy mahavariana an'ity artista rosiana antsoina hoe Ellen Sheidlin ity
Mpanakanto tanora fantany antsoina hoe Ellen Sheidlin. Ao amin'ny Instagram dia efa manana mpanaraka maherin'ny 4,5 tapitrisa izy miaraka amin'ny fahana tsy azo antoka.
Trano eclectic feno famoronana izay tian'ny mpanakanto rehetra hananana
Ny lamaody eklektika dia lamaody kokoa noho ny taloha, fa inona no ahitana azy? Inona ireo trano eclectic izay mahomby amin'ny tambajotra?
Fitsaboana ara-javakanto sy mandala: ny fomba hanampiana antsika handresy ny adin-tsaina
Inona no ilana ny Terapy Art? Inona no dikan'ny mandala? Afaka manampy anay amin'ny adin-tsaina ve ianao? Aza adino ity lahatsoratra ity!
Sarimihetsika 10 sy andian-tantara feno famoronana tsy azonao hadino
Iza no mpankafy zavakanto tsy nanonofy hanana fiainana bohemia? Miroboka ao anaty tontolo feno fahaiza-mamorona amin'ireo sarimihetsika ireo!
Nanao ezaka ny mpamorona Punisher hamerina ny sary famantarana ny karandohany ho an'ny #blacklivesmatter
Ilay mpiara-mamorona an'i Punisher dia manome ny karan-doha ho an'ny T-shirt hatao ary ny vokany dia mankany amin'ny hetsika #blacklivesmatter.
Ny hevitr'i Banksy hamerina ny sarivongan'ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny toerany dia feno fahendrena, saingy miaraka amin'ny antsipirihany sy sarivongana mitovy habe amin'ny fiainana.
Tena sary sokitra eo afovoan'ny natiora mba hampisehoana ny vokatry ny fizaran-taona
Toerana iray very any anaty ala ary mahita ity sary sokitra "velona" antsoina hoe Mud Maid ao amin'ny Lost Gardens any Heligan ity.
Aya and the Witch no sarimihetsika 3D voalohany an'ny Studio Ghibli
Zava-misy tsy mahazatra fa miatrika ny sarimihetsika 3D voalohany nataon'i Studio Ghibli izahay ary ny zanakalahin'i Hayao Miyazaki no nitantana azy.
Saron-tava Disney mitondra endri-tsoratra avy amin'ny Star Wars, Marvel, Pixar ary ireo toetrany toa an'i Mickey Mouse tenany.
Natolotr'i Disney izy io hifantoka amin'ilay Baby Yoda mahafinaritra izay fantatsika rehetra amin'ny andian-tsarimihetsika amin'ny ony streaming, The Mandalorian.
Fomba iray mahaliana hitondrana an'i Goku avy amin'ny Akira Toriyama lehibe mankany amin'ny Studio Ghibli amin'ny alàlan'ny fisarihana mpanakanto toa izao.
Burker King dia te handao any Italia ny hevitra fa ny Whopper izay manana tongolo telo heny fanampiny dia mety hisy fiatraikany amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Ankafizo ny torolàlana nomen'ny LEGO toro-hevitra momba ny fifandraisan-davitra ary izany dia hisiky ny tarehinao rehefa mahita azy ianao
Mampino ny haavon'ny antsipirian'ny asan'ity studio ity antsoina hoe Mozu Studios ary tarihin'i Mizukoshi mandritra ny 21 taona.
Ahoana ny fomba handravahana ireo lalànan'ny rindrina ratsy tarehy miaraka amin'ny hevitra mahafinaritra an'ity mpanakanto ity
Manohy ny hevitr'ireo mpanakanto noforonina izay voafetra amin'izao andron'ny coronavirus izao isika ary manana ...
Ity mpanakanto ity dia mamoaka ny fahaizany mamorona karaoketra miaraka amin'ny atin'ny tranony
Tao anatin'ny roa volana nigadrany, Nathalie Lété dia nanazava tsara taminay fa mamoaka ny fahaizany mamorona rehetra izy amin'ny fampiasana ny tranony toy ny lamba canvas.
Sarivongana fasika mahavariana an'i Bastarrika izay toa biby tena izy
Miasà tsara ny volon-koditry ny biby mba hamoronana zava-tsoa tena izy. Andoni Bastarrika sy ireo sary sokitra fasika ireo.
Rehefa voan'ny mihetsika miadana dia mahatonga ny nofo hihetsika amin'ity doka Swisse Me ity
Ny endrika malefaka sy mampihetsi-po an'ity dokambarotra ho an'ny Swiss me ity ary mitondra antsika any amin'ny erotisma ny akondro sy ny frezy ho hanim-py.
Ilay sarontava mahira-tsaina sy majika miova ho Harry Potter
Namboarina miaraka amin'ny pigment izay mihetsika amin'ny hafanana, saron-tava Harry Potter io. Noforonin'ny mpanakanto Hook.
IKEA dia maniry ireo ankizy kely ao an-trano hamorona ny tranony, fivarotana ary maro hafa
Miaraka amin'ireto boky torolàlana an'ny IKEA ireto, ny kely indrindra amin'ny trano dia afaka manangana trano mimanda, fivarotana ary maro hafa miaraka amin'ny fanaka ao an-trano.
Amin'ny famahana vahaolana hyper dia azonao jerena ny sary «The Night Watch» nataon'i Rembrandt
Aza adino ny fotoana ary fidio ny rohy zarainay hizaha an'i Rembrandt's The Night Watch sy ny lanjany 44GB.
Ireo sarontava tsy mahazatra an'ny Ýrúrarí
Amin'izao andro mihazona izao, ity mpanakanto Islandy ity dia namorona saron-tava tsy mahazatra izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha.
Ny endrika famoronana toast famoronana indrindra hita
Ity mpanakanto Japoney ity dia namoaka ny lafiny famoronana farany nataony tao anatin'ireo 16 toast ireo, ankoatry ny famoronana dia toa tsara.
Azonao atao izao ny mampandeha ny maody maizin'ny Facebook amin'ny kinova desktop
Avy amin'ny bokotra iray eo amin'ny sisin'ny sisiny, azonao atao izao ny mampandeha ny maody maizin'i Facebook ao amin'ny kinalan'ny birao avy amin'ny endrika fanavaozana vaovao.
Mahagaga Photoshop Cut & Paste AR Technology Izay Hahatonga ny lohanao hipoaka
Ny programmer iray dia nahatonga antsika adala tamin'ny famolavolana rindrambaiko afaka manapaka sy mametaka zavatra avy amin'ny tena tontolon'ny Photoshop.
Marika teknolojia misy doka toa azy ireo tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX
Ny marika toa an'i Apple dia hita ao amin'ireto doka volavola noforonin'i uswitch ireto misy lahatsoratra 6 manome ny lantom-peony. Tolo-kevitra iray manontolo.
Fernando Simón sy ny fitoniany dia lasa fisehoan'ny mpankafy miaraka amin'ny sary sy meme
Andro aman'alina ny tsy fiandany sy ny fitoniany dia niteraka fitoniana ho an'ireo Espaniola an-tapitrisany izay nanatrika ny angona vaovao momba ny aretina sy maro hafa.
Banky dia manaitra antsika amin'ny fanekena ireo trano fidiovana ho toy ny tena maherifo
Niainga tao amin'ny faritra vonjy maika tao amin'ny hopitaly anglisy, Banksy niverina tany amin'ny toerana fidiovana hatrany amin'izao COVID-19 izao.
Ity hevitra Blu-ray boaty avy ao amin'ny Studio Ghibli ity dia nahatonga ny Internet ho tia
Ny mpankafy iray dia afaka nahatonga ny Internet ho raiki-pitia tamin'ny foto-keviny momba ny boaty blu-ray My Neighbor Totoro avy amin'ny Studio Ghibli.
Araraoty ny fotoana malalaka anananao amin'ny boky Destroza este diary
Araraoty ny fotoana malalaka anananao amin'ny boky Destroza este diary, boky izay hamoaka ny famoronana rehetra entinao ao anaty amin'ny fomba mahafinaritra be.
Tavoahangy miloko ho an'ny ankizy kely ao an-trano mba hanao traikefa nahafinaritra nandritra ny andro nigadrana
Ny fahaiza-mamorona ao anaty tranomaizina dia mety hiteraka fotoam-pianakaviana mahafinaritra toy ity avy any Atlanta sy ireo tsaoka miloko ireo.
Ireo ve no endrika entana tsy misy ilana azy isan'andro?
Tian'ity mpanakanto grika ity ianao mba hahita fotoana mahafinaritra hijerena ireo zavatra tsy misy ilana azy ireo, izay mety ho vera misy kaontenera roa aza.
Fianarana Domestika maimaimpoana ho an'ny confinement izay ahafahanao manatsara ny fahaizanao mamolavola miaraka amin'ireo mpampianatra tsara indrindra amin'ity sehatra ity.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia mitovy amin'ny sary hosodoko ihany ary asehon'i Dubovik amintsika ny teknika lehibe nananany talenta lehibe. Fianakaviana mpandrafitra.
Raha tsy milaza amin'ny fotoana rehetra izahay fa tena lolo miloko vatana ity lolo ity, dia tsy hianjera amin'ny ...
Ahoana ny fanaovana sary ny tarehin-tsoratra Disney an'ny Disney Parks
Disney Parks dia mampianatra antsika amin'ny fantsona YouTube azy ireo ny fomba fanaovana sary ny endri-tsoratra Disney malaza indrindra. Aza adino izy ireo.
Gene Dietich dia mamela antsika, mpanao sariitatr'i "Tom sy Jerry" sy "Popeye"
Fomba fientanam-po mahafinaritra no nandao antsika omaly, Gene Dietich. Fantatra amin'ny maha mpanao sariitatra an'i Tomy sy Jerry ary ilay Popeye lehibe.
Ankehitriny ao anaty fonosana mankany amin'ny Adobe Photoshop amin'ny iPad sy Adobe Fresco Premium amin'ny vidiny lafo
Amin'ny vidiny lafo dia manana Adobe Photoshop amin'ny iPad sy Adobe Fresco Premium ianao ho iray amin'ireo zava-baovao. Boky fandokoana vaovao ihany koa.
Ny tranombakoka J. Paul Getty dia mihaika ny olona any an-trano hamorona sary hosodoko malaza
Tahaka ny maro hafa, afaka mamerina mamorona sary hosodoko malaza ianao miaraka amina zavatra 3 ary ampitao ao amin'ny tranombakoka Getty mba hampisehoana azy ireo.
Ity no sary famantarana Dune vaovao
Villeneuve no hiandraikitra ny fitantanana ity sarimihetsika ity izay havoaka amin'ny 18 Desambra. Miandry antsika izao ny Dune miaraka amina sary famantarana vaovao.
Miverina indray i El Víbora amin'ity vanim-potoana voan'ny coronavirus ity miaraka amin'ireo isa tsy misy tambiny an-tserasera
Ny tsy fanajana, manokana, feno faniriana ary hedonista dia sasany amin'ireo adjectif izay azontsika ampiasaina hiresahana ilay The Viper of the Dome lehibe.
Paco Roca dia manome ny tantara an-tsariny 'Fahatsiarovana lehilahy manao akanjo lava' amin'izao andro fitanana izao
Boky mahafinaritra sy mahatsikaiky nandritra ny andro nitazomana azy ary nomen'ny mpanoratra azy manokana Paco Roca. Any ianao dia manana Memoirs of a Man in Pajamas.
Homo Machina dia misy amin'ny Android izao hahafantarana ny asan'i Fritz Kahn
Ny vatan'olombelona no tompon'andraikitra amin'ity lalao antsoina hoe Homo Machina ity ary mitondra anao alohan'ny fahitana avant-garde an'i Fritz Kahn.
Nanambara izy androany fa manana andiana pejy fandokoana maimaimpoana avy amin'i Adobe ianao hisintomana mandritra ny fotoana voafetra.
Ny fonony an'ny The New Yorker dia mampiseho tsara hoe inona ireo andro COVID-19 ireo
Famoahana iray izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha an'ireo fonony ireo izay mampiseho ny andro iainantsika noho ny coronavirus. The New Yorker.
Serif, mpamorona ny Affinity, dia te-hividy ny sanganasa noforoninao
Raha nahafoy na nanafoana ireo tetik'asa famoronana ianao dia novidian'i Serif $ 1.500. Raha mbola vita amin'ny programa misy azy ireo izany.
Ny sary hosodoko Hopper dia misy dikany lehibe kokoa amin'ny vanim-potoana coronavirus
Ny tanàna an-tanànan'ny tanàna sy ny olona manirery dia ampahany amin'ny asan'ilay mpanao hosodoko realista tamin'ny taonjato faha-XNUMX, Edward Hopper.
Raha te hahalala ny fitiavany sinema ianao dia aza hadino ity fampianarana maimaimpoana vaovao ity ao amin'i Edward Hopper avy ao amin'ny Thyssen Museum.
Miverina any amin'ny niandohany mba hampiraisana ny marika amn'ny orinasa sy ny loko miloko miaraka amin'ny feon-tsoratry ny orinasa.
Ny vato nolokoin'ity mpanakanto Japoney ity izay mitondra antsika amin'ny biby faratampony ary anaovan'ny endrik'ilay vato ny endriny.
Nodimandry i Albert Uderzo, mpamorona ny Asterix ary nanome antsika fotoana be dia be niaraka tamin'i Obélix
Izany olona galika tsy azo ovaina izany dia tsy hotarihin'ilay mpamorona azy Albert Uderzo intsony rehefa nandao antsika tamin'ny faha-92 taonany.
Ity mpanakanto ity dia mamorona fehezam-boninkazo goavambe vita amin'ny taratasy tavy
Mpanakanto iray izay niasa tao amin'ny Karl Lagerfeld sy marika hafa ary hamela anao ho very hevitra amin'ny asany amin'ny taratasy sy ireo fehezam-boninkazo ireo.
Aiza ny fanontana Wally coronavirus
Sary iray maneho tsara ny halaviran'ny fiaraha-monina miaraka amin'ny tolo-kevitra noforonin'ireto mpanakanto roa ireto sy ny fanontana azy hoe Where is Wally.
Famantarana vaovao dia namboarina ho an'ny vanim-potoana coronavirus
Manome fihodinana ho an'ny marika marika malaza handikana ny vanim-potoana ankehitriny an'ny virus corona sy ny fiovan'ny fiarahamonintsika.
Google doodle manalavitra ny sosialy nataon'i Google ho an'ny mpampiasa
Ny mpampiasa iray dia namorona doodle tena marani-tsaina izay manazava ny halaviran'ny fiaraha-monina tokony horaisintsika amin'ny taratasin'i Google.
Azonao an-tsaina ve i Mario ho LEGO? Toy ny tena izy: ekipa Nintendo sy LEGO hiatrika izany
Raha ny marina, raha mieritreritra isika fa ny Nintendo's Mario dia nihalehibe tao anaty "pixelated" intern, ny hevitra amin'ny fametrahana azy miaraka ...
Ireo saripika misy saribao sy pastel izay misambotra ny zava-misy toy izany amin'ny hazavana novinavinain'izy ireo
Mpanakanto iray natokana ho an'ny sarin'ny modely vehivavy ary amboariny mazava miaraka amina talenta sy pastel.
Mahagaga ity doka Adidas ity
Mahagaga ny zavatra azo tratrarina amin'ny alàlan'ny tsipika tsotra misy tsipika marindrano ao amin'ny sary famantarana ny zoro telo Adidas.
Miady amin'ny coronavirus any Shina miaraka amin'ny sary izay milaza izany rehetra izany momba ny ampahany amin'ny olombelona
Ny coronavirus dia azo asiana ady amin'ny taco Meksikana, paella Espaniôla na hamburger amerikana voasoratra amin'ity sary ity.
Stamp ho an'ny nostalgia amin'ny lalao retro
Ny lalao toy ny Sensible Soccer na Populous dia azo jerena amin'ity fanangonana hajia ity avy amin'ny Royal Mail ary hivoaka amin'ny 21 Janoary izy ireo.
Ny fotoana mahatsikaiky indrindra an'i Jerry saka dia nivadika sary sokitra nataon'ny mpanakanto Japoney
Takou Inoue dia mitondra antsika ireo sary sokitra feno fiainana amin'ny alàlan'ny fakana ireo fotoana mahatsikaiky indrindra an'i Jerry saka avy amin'ilay andian-tsarimihetsika malaza Tom sy Jerry.
Leonardo Da Vinci tamin'ny taona 1502 dia efa nanao sarintany "satelita" amin'ny tanàna italianina
Iza no hilaza fa i Leonardo da Vinci dia nahavita nanao sary ny sarintanin'i Imola, tanàna italianina, tamin'ny taona 1502.
Raha ny an'ny Microsoft dia ny an'ny tarika vy
Iza no afaka nieritreritra fa an'i Microsoft ity logo ity tamin'ny 1982. Ho avy amin'ny famolavolana izay mihoatra ny te hahafanta-javatra ary tsy te halahelo isika.
Mpanakanto maro kokoa no mivondrona mba handray ny zavaboary mahafinaritra indrindra amin'ny vahindanitra: Yoda zazakely
Efa elaela izay no tsy nahitantsika endrika mahafatifaty sy mahafatifaty toa an'i Baby Yoda. Mpana sary maromaro no niditra tao amin'ilay virus.
Ireo sary vongana taolana goavambe ireo dia natsangana tamin'ny Andron'ny Maty tany Mexico
Mankalaza ny Andron'ny Maty i Meksika ary amina sary sokitra taolam-bolo lehibe any an-tanàna natsangana hankalazana azy.
Ny Logo Vaovao NASA dia mankalaza ny fandefasan'ny vehivavy ny volana
Artemis dia andriamanibavy grika amin'ny volana ary rahavavin'i Apollo kambana, andriamanitra grika nipoitra ny anaran'ny iraka voalohany tamin'ny volana.
Ahoana no fomba hahamety ny endrik'ireo mpanangona ireo amin'ny alàlan'ny hot.kenobi
Hot.kenobi dia Japoney mpaka sary iray izay nanana ny eritreritra lehibe haka ireo tarehimarika voangona ireo hanoratra ny seho maherifo, Goku ...
Ny sasany amin'ireo sary nataon'ny mpankafy Joker, ny sarimihetsika Joaquin Phoenix
Ireto sary Joker ireto dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha, ankoatry ny aingam-panahy avy amin'ilay sarimihetsika ary mampiseho ny ampahany amin'ilay toetrany notontosain'i Phoenix.
Ny fampielezan-kevitr'i McDonald amin'ny resaka maso
Tena mamorona ity fampielezan-kevitra dokambarotra McDonald vaovao ity izay ahitanao ireo hamburger malaza asehon'ireo "teatra" isan-karazany.
Manaova sary amin'ny alàlan'ny fikapohana ampahany manokana amin'ny vera
Mampiasa vera ity mpanakanto ity ho fitaovana manta hamoronana ny sariny, izay nanjary tena niavaka sy niavaka teo amin'izao tontolo izao.
Ny fanasana ny hetsika Apple iPhone 11 dia manasongadina ity logo vaovao ity amin'ny loko feno sy endrika tsara.
Ny horonantsary Espaniola an-tsary Buñuel ao amin'ny Labyrinth of the Turtles dia nisafidy ny lisitra Oscas
Ny sarimihetsika The Labyrinth of the Turtles dia nisafidy lisitra fohy ho an'ny Oscar. Sarimihetsika nataon'i Salvador Simó sy ilay mpamokatra ESDIP.
Miaraka amin'ny Android 10, ny G lehibe manome lalana ny famantarana vaovao sy ny famantarana ny marika izay lokony no ho mpiorina mandritra ny taona vitsivitsy.
Vigil dia mpanakanto mofomamy miaraka amin'ireto mofomamy ireto voaravaka toa kofehy. Fanehoana ny haingon-trano mofomamy.
Isaky ny afaka mametraka tsiky amin'ny sary famantarana ianao
Ny mombamomba ny marika Jetlines vaovao any Canada dia mitondra antsika atody easter izay manafina ny tarehiny amin'ny tsiky manintona.
Fetsy sasany amin'ny fanaovana sary tanana nataon'i Miyuli
Miyuni dia mpanakanto izay avy amin'ny kaonty Twitter-ny no mampiseho amin'ny fomba an-tsary torohevitra vitsivitsy hianarana misoratra.
Rehefa fries McDonald's fries dia mpitari-dalana môtô
Ny fries an'ny McDonald dia nanjary mpitari-dalana noho ny hevitra lehibe notanterahan'ny masoivohon'ny dokambarotra.
Emojis ho fantsona dokam-barotra vaovao?
Ford dia mampiasa emoji ho toy ny fantsom-barotra vaovao, na dia mampiseho ny Ford Ranger azy fotsiny aza ilay emoji amin'ny loko manga ...
Ity mpanakanto ity dia mampiseho fahalavorariana toy izany amin'ny kanto taratasy ka sarotra ny manavaka azy amin'ny zavatra mety hataon'ny milina mozika.
Indraindray zavatra tsara ve ny mamadika ny zavatra toy ny fampielezan-kevitra KFC?
Ny marika amerikana sakafo haingana amerikana KFC dia tao anatin'ity fampielezan-kevitra ity ho an'i Russia ny iray amin'ireo tranga mahatsiravina indrindra hita tato ho ato.
Ny haavon'ny pitsopitsony tsy mampino ao amin'ny Toy Story 4
Toy Story 4 dia tsy hanana tohiny, fa ny haavon'ny antsipirihany dia namela ny mponina sy ny olon-tsy fantatra notsoahan'ny artista fotsiny.
Tao amin'ny MIT dia namolavola fahazoan-dàlana artifisialy afaka manaisotra sy mametraka singa amin'ny zava-misy tsy ampoizina izahay ka gaga.
Ny Kate Kyehyun Park dia mampianatra anao amin'ny dingana telo hanoratanao sary sy handokoana voninkazo mahafinaritra izay ahafahanao manome fanomezana tsara ho an'ny olona iray.
Vans aingam-panahy avy amin'ny mpanao hosodoko malaza Frida Kahlo
Vans dia te-hanome voninahitra an'i Frida Kahlo, mpanao hosodoko meksikana, miaraka amin'ny maodely telo amin'ny sneaker tena kanto ho an'ity taona 2019 ity.
Ny seza tokontany tsara indrindra ho an'ireo mpankafy Star Wars
Miaraka amin'ireo seza ireo miorina amin'ny mpiady Star Wars TIE, dia ho lasa malaza amin'ny mpankafy ny mpamorona Filipino Kenneth Cobonpue.
Mpanakanto Japoney isan-karazany no namorona andian-dahatsoratra anime miorina amin'ny sainam-pirenena sy firenena mandray anjara amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020.
Tsy nandany fotoana ny Pizza Hut ary niverina tamin'ny fakany tamin'ny fitondrana ny sary famantarana izay hitantsika nandritra ny am-polony taona maro tamin'io mena sy tafo manokana io.
Ilay fanadihadiana '10 taona niarahana tamin'i Hayao Miyazaki 'dia mampiseho ny talen'ny Spirited Away mivantana
'10 Taona niarahana tamin'i Hayao Miyazaki 'dia rakitra an-tsary sy feo misy kalitao tsy mampino momba ny atiny ary koa mampiseho antsika iray amin'ireo angano.
Tung Ming-Chin dia mpanakanto Taiwaney izay manazava ny fikasany lalina amin'ireo sary sokitra vita amin'ny hazo. Tsy mamela olona tsy hiraharaha izany.
Angela Moulton dia aingam-panahy avy amin'ny natiora hanao ireo hoso-doko menaka tsara an'ny vorona ary miasa miaraka amin'ny borosy lehibe.
Ny fiadidiana ny tanànan'i Madrid dia mamela ny paositra rehetra nandravaka ny tanàna hatramin'ny 2016
Nanangana tranokala ny Conseil City Madrid mba hahafahanao misintona ny afisy rehetra natao hatramin'ny 2016 ka hatramin'ny 2019 amin'ny famahana farany.
Pejin-tranonkala tsotra 30 tsy mampino
Fanambarana mahatalanjona amin'ny pejin-tranonkala tsotra 30 miavaka
Marco Melgrati sy ireo sary manahirana azy amin'ny andro izay manohina antsika
Nisy mpanakanto italiana nitora-bato an'i Melgrati ary hitanao ao amin'ny kaontiny Instagram hahitanao ireo sanganasa kanto maro nataony.
Iza no hilaza amintsika fa hahita io fomba fijery Mickey Mouse io isika indray andro
Ny sarin'i Mickey Mouse noforonina tamin'ny fomba fijery avy any ambony dia hita tao amin'ny kaonty Twitter ka nahagaga ny maro.
Adobe dia manavao ny fitaovany an-tranonkala amin'ny palety miloko antsoina hoe Adobe Color
Raha mitady mpandinika palette miloko mandeha ho azy ianao dia efa manana ao amin'ny Adobe Color ny safidy hampiasa an'i Pantone hamaritana azy ireo.
Netlfix dia manana andian-jaza ho an'ny famoronana
Tianao ve ny andian-tantara? Ao amin'ny Netflix dia premiere andiany fanadihadiana momba ny mpanakanto tsara indrindra izay miavaka ny taranja samihafa.
Ankehitriny ny kintana mena an'i Heineken dia lasa mpiorina amin'ity famolavolana endrika fonosana marika labiera holandey ity.
IKEA dia mamolavola ny logo azy, na dia tsy misy fampiasa vaovao aza hatramin'ny lasa teo amin'ny 1992
IKEA dia naneho ny sary famantarana vaovao izay misy zava-baovao kely raha oharina amin'ilay teo aloha izay namboarina tamin'ny 1992.
Ny endrika tsy manam-paharoa an'ny Apple Card
Nohazavain'i Apple mazava fa tiany ny endriny mahafinaritra rehefa afaka mahita ny Apple Card miaraka amin'izany minimalism vita amin'ny titanium isika.
Pantone dia mamoaka loko metaly vaovao ho an'ny fonosana, marika ary marketing
Ny loko metaly vaovao avy any Pantone dia mifantoka amin'ny fonosana, marketing ary marika ary azonao vidiana manomboka androany.
Ny mpanao sary sokitra Espaniola dia mamorona amperora romana malaza amin'ny sary sokitra be loatra
Ny tanora mpanao sary sokitra espaniola dia mamerina amin'ny laoniny ny amperora romana telo malaza any Roma klasika. Asa tsara.
Nahazo ny Oscar ho an'ny Animated Short tsara indrindra i Bao 2019
Bao dia miresaka momba ny renim-pianakaviana sinoa manirery izay mararin'ny tazo tsy ampoizina. Fohy avo lenta sy tena olombelona avy any Pixar.
Ny freshness sy ny loko an'ny sary nataon'i Pascal Campion
Pascal Campion dia mitondra antsika alohan'ny tontolon'ny loko sy ny zavatra isan'andro. Ny fianakaviany sy ny tranony no loharanon'ny aingam-panahy isan'andro.
Fanalahidy handresena sakana famoronana
Niaritra ny famoronana indraindray isika rehetra. Androany no itondrako teknika roa anao handresena azy ity ary hiasa.
Ahoana ny fomba hahitana ireo fitambarana endri-tsoratra tsara indrindra
Typ.io dia tranokala vaovao ahafahantsika mampahafantatra loharano iray hanoroana anay momba izay mety ho fitambarana tsara amin'ny ohatra tena izy.
Mamorona tantara an-tsary malaza amin'ny faran'ny ambany indrindra amin'ny asa famoronana mpanakanto
Ity mpanakanto ity dia mampiseho amintsika ny niavian'ny aingam-panahy hamorona CubeMelt, vatomandry goavambe mahafinaritra nahafahany nanao tantara an-tsary 33.
Kirby Jenner dia mpamosavy Photoshop ary afaka mampiaraka amin'ireo olo-malaza marobe noho ny famerenany sary tsara.
Slack dia mamoaka fango vaovao feno loko nefa tsy manadino ny fotony
Slack dia fitaovam-pifandraisana lehibe amin'izao fotoana izao amin'ny fanovana dizitaly izay ilain'ny orinasa sy orinasa maro.
Ampifanaraho haingana ireo sarinao amin'ny tamba-jotra sosialy miaraka amin'ny Promo Image Resizer
Ampifanaraho haingana ny sarinao amin'ny tamba-jotra sosialy ilainao toy ny Facebook, Twitter, Instagram ary maro hafa
Duolingo dia mamolavola endrika ny biby fiompinao mba hitia azy bebe kokoa raha azo atao
Duolingo dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra hianarana fiteny iray ary ataontsika amin'ny alàlan'ny filalaovana izany mba hahafa-po kokoa ny zava-drehetra.
Ny sarin'i Kamalky Laureano amin'ny antsipiriany
Mpanao hosodoko tonga lafatra izay mandray ny antsipiriany amin'ny firafiny amin'ny ambaratonga avo indrindra mba hamokarana sanganasa mafana lehibe.
Opticia Sans no loharanom-pahalalana an-tsary an'ireo sarintanin'ireo mpitsabo maso
Opticia Sans no endri-tsoratra ampiasaina amin'ny tabilao LogMAR hita ao amin'ny tobim-pitsaboana momba ny maso. Karazan-tsoratra kanto sy tena manokana.
Ity artista japoney ity dia manova ny boaty sy ny fonosana snacks ho zavakanto
Kirigami dia kanto manapaka taratasy any Japon ary tsara ny ohatra nasehon'ity mpanakanto antsoina hoe Haruki ity amin'ny asa famoronana toy izany.
FontSpark dia rindrambaiko web izay miasa toy ny hatsarana ary hanome antsika hevitra arakaraka ny lohahevitra manokana sy ny famantarana hafa izay tsy maintsy omentsika azy.
Te ho original ianao? Ity Noely ity aza misalasala manome fanomezana ho zavakanto. Raha mila aingam-panahy ianao dia afaka manampy anao amin'ny safidy isan-karazany izahay.
Ireo sary sokitra vita amin'ny hazon'ny hazomalahelo
Sary vongana sasany natsangana tamin'ny fomba tsara tany anaty ala toa ilay nampiasain'i Anna ho an'ny sangan'asany miorina amin'ny tsorakazo willow.
Jereo hoe inona ny palette loko Pantone 2019 misy amin'ity fanontaniana ity
Mba hamaranana tsara ny taona dia valio ny fanontaniana 10 hahitanao hoe hanao ahoana ny loko paletao Pantone 2019. Fomba mahafinaritra hianarana.
Ilay Origami mahafinaritra an'i Cristian Marianciuc miaraka amin'ireo vano mahafinaritra
Cristian Marianciuc dia afaka mampiakatra ny haavon'ny antsipiriany mba hamela antsika ho very hevitra amin'ireo Origamiera noforoniny tamin'ny tanany manokana.
Rehefa manova ny sary an-tsoratra nosoratan'ny zanany ho fanoharana ny raim-pianakaviana
Nanana hevitra lehibe ity raim-pianakaviana ity mba haka aingam-panahy amin'ireo zanany hamorona andiana maherifo. Fahombiazana tokoa.
Mampiseho ny fitaintainantsika amin'ny mobiles amin'ny sary vongana
Ity artista britanika ity dia afaka mampiseho ny fiheverana an-tsasan'ny antsasak'izao tontolo izao amin'ny findainy. Sary sokitra afaka misambotra an'izany rehetra izany.
Living Coral no loko Pantone an'ny taona 2019
Efa manana ny loko Pantone vaovao ho an'ny taona 2019 isika ary ity dia Living Coral. Toy ny isan-taona ary toy ny ...
Misy fomba maro hanamarihana ireo fanomezana amin'ny fialantsasatra. Mampianatra anao marika maro samihafa izahay mba tsy hisy hanao fahadisoana rehefa manokatra fanomezana Ho, ho, ho!
Ahoana ny famonosana fanomezana Krismasy
Amin'ny Krismasy dia azonao antoka fa manolotra fanomezana. Raha tsy hainao ny mamonosina azy ireo hahasarika azy ireo dia ampianarinay hevitra maro ianao mba hamonosana fanomezana amin'ny fomba tany am-boalohany
Sary avy ao anaty afo tao California
Berger dia afaka nanaitra antsika tamin'ireny sary ireny izay mampiseho ny fampihorohoroana rehetra nonina tamin'izany andro izany tany California.
DIY Krismasy karatra paositra
Aza adino ny iray amin'ireo fomban-drazana tsara indrindra amin'ny Krismasy noho ny tsy fisian'ny hevitra. Atorinay anao ny fomba fanaovana kartie krismasy voalohany.
Miaraka amin'ny fanjaitra sy tsipika hampianarana ny astronomia amin'ireo mpianany tamin'ny 1876
Nandany 7 taona i Ellen Harding Baker namboariny lambam-pandriana izay hampianariny kilasy astronomia amin'ireo mpianany. Astronomista amerikana lehibe.
Fanoharana niomerika nataon'i Michal Sawtyruk namboarina tamin'ny Photoshop
Michal Sawtyruk dia afaka mitondra antsika amin'ny alàlan'ny seho ivelany tototry ny hazavana marobe ary ny nomerika atolotry ny Photoshop.
Boky zavakanto maimaimpoana 569 misy amin'ny Internet avy ao amin'ny Metropolitan Museum of Art
Ny Metropolitan Museum of Art dia nampakatra atiny am-boalohany bebe kokoa izay azonao sintonina maimaim-poana. Boky kanto amin'ny fotoana rehetra.
Ny sary sokitra tsy misy sandry ny Louvre
Ny fandresen'ny elatra an'ny Samothrace dia iray amin'ny haren'ny Louvre ary mampiavaka izany noho ny antony manokana ampahafantarinay anao.
Ity no fitaovana ho an'ny 80 an'ny fampiharana malaza indrindra amin'izao fotoana izao
Spotify, Instagram na Netflix dia marika marika sasany izay azo zahana amin'ity fanovana ireo gadget malaza indrindra tamin'ny taona 80 ity.
Microsoft dia mamorona fahakingan-tsaina artifisialy izay manao kariketra amin'ny tavanao
Microsoft dia miasa amin'ny sampam-pitsikilovana artifisialy izay manintona sarin-tarehy izay saritany amin'ny sary. Ho avy tsy ho ela miaraka amintsika rehetra.
80 tapitrisa euro ny sanda azo tamin'ny asa nataon'i David Hockney tamin'ny lavanty
David Hockney dia iray amin'ireo mpanakanto velona malaza indrindra. Ny iray amin'ireo sanganasany dia nahatratra $ 80 tapitrisa tao amin'i Christie
Tamin'ny faha-96 taonany dia nandoko ny trano tsirairay tao an-tanànany izy mba hamonjy azy io amin'ny fandravana
Noho ny fikirizany sy ny faharetany dia afaka nanakana ny governemanta tsy handrava ny tanànany i Huang satria nandoko ny tranony rehetra.
Sarina pensilihazo tsara kalitaon'ny varavarana ao amin'ny Katedraly Milan
Ny katedraly Milan dia tanjon'ny fandalinana eo am-pelatanan'ity mpanakanto ity izay mitady ny tena fitadiavana zava-misy tanteraka. Asa mahatalanjona.
Ny dokotera any Angletera dia manoratra zava-kanto sy kolontsaina hanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana amin'ny marary
Ny dokotera any Angletera dia hanomboka hanoratra fomba fahandro anao hanaraka kilasy fanaovana sary, hanatrika fampirantiana na hanombohana fampianarana kilasy teatra.
Fanomezam-boninahitra mpanakanto bebe kokoa an'i Stan Lee, tantara an-tsary
Hizara sary sy fanoharana bebe kokoa izahay avy amin'ny mpanakanto marobe izay nanatevin-daharana ny fanomezam-boninahitra manokana an'i Stan Lee.
Manome voninahitra an'i Stan Lee izay nandao antsika omaly ny mpanakanto
Omaly ilay Stan Lee lehibe avy any Marvel dia nandao antsika mandrakizay, na dia manana lova lehibe aza izay hitohy miaraka amintsika mandritra ny fotoana maharitra.
Craig Alan dia mpanakanto iray izay manokana fotoana hamoronana andian-tsary izay mahaliana amin'ny antsipiriany.
Afaka segondra dia azonao atao ny manana andi-tsarin'ny vector endrika amina Adobe Illustrator. Mampianatra antsika i Edwards.
Tokyo mahagaga sy masiaka miaraka amin'ny sarin'i Yuichi Yokota
Yuichi Yokota dia manolotra an'ity andian-tsary misy azy ao Tokyo ity amin'ny tapaky ny ririnina ary ao anatin'izany ny fehezam-panala no mahery setra.
Kameran'ny Millenium 4 ho an'ny sarin'ny Lake Tahoe mandritra ny 1.000 taona
Ny filozofa Keats dia mandefa ny tetikasany izay fakantsary 4 no haneho ny fandehan'ny fotoana sy ny fanovana ny planeta mandritra ny 1.000 taona.
Ny mpanakanto dia mihevitra an'i Pokémon ho tena zavaboary ary mahatalanjona ny vokany
Joshua dia mpanakanto iray izay nikasa ny hamerina handinika an-tsaina ireo Pokémon rehetra izay mipetraka amin'ny zava-misy sy lalao console.
PIXL, na manamboatra ny «LEGO» amin'ny ho avy
Amboary izay rehetra azonao eritreretina amin'ny sakana PIXL izay mifamatotra amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny rafitr'ireo andriamby amin'ny fomba majika.
Ny rindrina nataon'i Bopp dia eny an-dalambe mba hitahirizana ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina iray
Ny sary hosodoko vita amin'ny sary hosodoko hosodoko eny amin'ny araben'ny tanàna toa an'i Los Angeles dia mampiseho ny kolontsain'ny fomban-drazan'ny vondrom-piarahamonina samihafa.
Trozona 32 metatra lehibe vita amin'ny taratasy nataon'i Nahoko Kojima
Mba hitaterana ilay trozona taratasy 32 metatra lehibe an'i Nahoko Kojima dia tsy maintsy navahana ilay taratasy nanakodia azy ary nitondra azy tany Thailand.
Dran, mpanakanto an-dalambe antsoin'izy ireo hoe 'French Banksy'
Graffiti no làlan'ny fitsikerana ara-tsosialy amin'ny arabe iray ihany. Fampiasana Dran dia toerana iray hitakiana ny zon'olombelona sy hitsikerana ampahibemaso.
Ireo sary manaitra ny fiainana maoderina nataon'i Sergio Ingravalle
Ingravalle dia mpanao sary alemanina izay manana andian-tsary izay manome fomba fijery hafa momba ny fiainana maoderina ankehitriny.
Tsipika mahitsy eo amin'ny natiora: Nahita vatolampy mahitsizoro any Antarctica i NASA
Tsipika mahitsy fanitarana goavambe ho an'ny vongan-dranomandry mahitsizoro izay manameloka fa ny tanan'ny olombelona ihany no mamorona tsipika mahitsy.
Ity mpanakanto ity dia misambotra ny majika amin'ny fivarotana kely nentim-paharazana any Korea Atsimo
Ity mpanakanto Koreana Tatsimo antsoina hoe Me Kyeoung Lee ity dia mandika ireo magazay manodidina azy izay manjavona ao anaty akrilika.
Ny maritrano manokana an'ny mpanao maritrano Japoney malaza Tadao Ando
Tadao Ando dia mpanao mari-trano iray izay nahavita nanatratra ny fiainany tamin'ny fandalinana ny maritrano tamin'ny fomba nianarana samirery. aingam-panahy
Ahoana ny fanovana ny tranombokinao midadasika ho tolo-kevitra ara-javakanto
Boky marobe dia ireo izay sarobidy amin'i Elizabeth Sagan ary afaka miova ho sary mamorona izy hanehoana ny fitiavany mamaky.